Vaovao - Fanazavana sy famakafakana ny teknolojia famokarana Crankshaft
Fanazavana sy fanadihadiana ny teknolojia famokarana Crankshaft
Crankshafts dia be mpampiasa amin'ny motera. Amin'izao fotoana izao, ny akora ho an'ny maotera fiara dia vy sy vy vy. Noho ny fahombiazan'ny fanapahana vy vy dia vita ny fitsaboana hafanana isan-karazany sy ny fanamafisana ny fanamafisana ny endrika fanamafisana ny tanjaky ny havizanana, ny hamafiny ary ny fanoherany ny crankshaft. Ny crankshafts vy malemy dia ambany ny vidiny, noho izany ny crankshafts vy ductile dia be mpampiasa ao an-trano sy any ivelany. Etsy ambany dia hampahafantatra ny teknolojia famokarana crankshaft izahay.
Teknolojia famokarana crankshaft:
1. Casting teknolojia ny vy ductile crankshaft
Ny fahazoana vy avo lenta, solifara, vy anidina an-idina no fanalahidin'ny famokarana vy metaly avo lenta. Ny fitaovana famokarana an-trano dia miorina amin'ny cupola indrindra, ary ny vy anidina dia tsy voaparitaka mialoha; ny faharoa dia vy mahadio avo lenta ary tsy kalitao ny coke. Amin'izao fotoana izao, ny fomba fandrendahana alohan'ny famoahana indroa ivelany dia noraisina, izay mampiasa cupola handrendrika vy anidina, manaparitaka azy ivelan'ny lafaoro, ary avy eo manafana sy manamboatra ny fangaro ao anaty lafaoro fampidirana. Amin'izao fotoana izao, ny fahitana ireo singa vy an-trano dia natao tamin'ny fampiasana spectrometer famakiana mivantana ny banga.
Ny dingan'ny famolavolana ny fiakaran'ny rivotra dia miharihary fa ambony noho ny fizotry ny karazana fasika tanimanga, ary azo atao ny manary crankshaft avo lenta. Ny bobongolo fasika vokarin'ny fizotrany dia manana toetra tsy misy fiovana mihoampampana, izay manandanja indrindra ho an'ny crankshaft marolafy. Amin'izao fotoana izao, ny mpamokatra crankshaft sasany any Shina dia nanolotra ny dingan'ny famolavolana ny fiakaran'ny rivotra avy any Alemana, Italia, Espana ary firenena hafa. Na izany aza, mpanamboatra vitsivitsy monja no nampiditra ny tsipika famokarana iray manontolo.
2. Forging teknolojia ny vy crankshaft
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, fampitaovana fanamboarana mandroso maro no nampidirina tao Shina, saingy noho ny isa vitsy, ampiarahina amin'ny teknolojia famokarana bobongolo sy ny fotodrafitrasa hafa, ny fitaovana mandroso sasany dia tsy nandray ny anjara asany. Amin'ny ankapobeny, be dia be ny fitaovana fanaovana hosoka taloha izay mila fanovana sy fanavaozana. Mandritra izany fotoana izany, ny haitao sy haitao mihemotra dia mbola mibahana toerana ambony, ary ny haitao mandroso ampiharina nefa mbola tsy miparitaka.
3. Teknolojia fanodinana mekanika
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny tsipika famokarana crankshaft ao an-trano dia misy fitaovan'ny milina tsotra sy fitaovana milina manokana, ary ambany ny fahombiazan'ny famokarana sy ny mandeha ho azy. Ny fitaovana mavesatra indrindra dia mampiasa lathe-multi-fitaovana hamadihana ny diary lehibe sy ny vozona, ary ny fitoniana kalitaon'ny fizotrany dia mahantra, ary mora ny miteraka fihenjanana anaty lehibe, ary sarotra ny manatratra antonony milina fanampiana. Ny famaranana ankapobeny dia mampiasa milina fitotoana crankshaft toy ny MQ8260 ho an'ny fikosoham-bary mahery vaika - famaranana - fikosoham-bary tsara - famolahana, matetika amin'ny alàlan'ny fiasan-tanana ary tsy milamina ny kalitaon'ny fanodinana.
4. Fitsaboana hafanana sy teknolojia fitsaboana fanamafisana ny aty
Ny teknolojia manan-danja amin'ny fitsaboana hafanana ny crankshaft dia ny fanamafisana ny fitsaboana ambonin'ny tany. Ny crankshafts vy fantsom-bozaka dia mazàna voaomana ary voaomana amin'ny fanomanana ny any ambony. Ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny tany amin'ny ankapobeny dia mampiasa fanamafisana induction na nitrida. Voaporitra sy boribory ny crankshaf vy vita amin'ny vy. Ny fitaovana nohafarana dia misy ny milina famonoana crankshaft automatique AEG ary ny milina famonoana ain'NY